izitena RBSiC - China ZhongPeng Special Ceramics
Reaction kophethe Silicon khabhayithi iinxalenye Wear mgaqweni kunye Yolula iibheringi The Reaction kwii Silicon khabhayithi ukumelana uluhlu olubanzi asidi kunye alkalis. Kwaye umsebenzi ogqwesileyo amandla aphezulu, lukhuni phezulu, ukumelana eliphezulu banxibe, ukumelana eliphezulu lobushushu, nokumelana. Ngeentlobo ezahlukeneyo zeemilo ze iindawo ezizodwa zilufanele kwemigodi, petrochemical, kwezemveliso metallurgical, aerospace kunye namashishini zenyukliya, ezifana nendawo ethile. Sinako ukwenza nayiphi na ubukhulu ...
Reaction kophethe Silicon khabhayithi for Irregular Wear Parts and Thrust Bearings
Le Reaction kophethe Silicon khabhayithi ukumelana uluhlu olubanzi asidi kunye alkalis. Kwaye umsebenzi ogqwesileyo amandla aphezulu, lukhuni phezulu, ukumelana eliphezulu banxibe, ukumelana eliphezulu lobushushu, nokumelana. Ngeentlobo ezahlukeneyo zeemilo ze iindawo ezizodwa zilufanele kwemigodi, petrochemical, kwezemveliso metallurgical, aerospace kunye namashishini zenyukliya, ezifana nendawo ethile. Sinako ukwenza nayiphi na ubukhulu ezinikiweyo ngokungqinelana isicelo umthengi.
Previous: RBSiC (SiSiC) etsobhileyo sleeve
Okulandelayo: Reaction lesilicon kophethe isahluli khabhayithi lokucoca ulwelo
ingxenye Solid RBSiC
Nxiba imizimba domal enganyangekiyo